စားသောက်ဆိုင် စားပွဲပေါ်က အကာအရံ တွေက ကိုဗစ်ကို တကယ် ကာကွယ်နိုင် ရဲ့လား? – Let Pan Daily
စားသောက်ဆိုင် စားပွဲပေါ်က အကာအရံ တွေက ကိုဗစ်ကို တကယ် ကာကွယ်နိုင် ရဲ့လား?
စားသောက်ဆိုင်မှာ အလယ်က အကာကြီးက အဆင် မပြေဘူး။ သဘာဝ လည်း မကျဘူးလို့ ထင်တယ်။
တစ်အိမ်တည်းနေ၊ တစ်ကား တည်းစီးလာပြီး စားသောက်ဆိုင်ရောက်မှာ အကာကြီးနှစ်ဖက်ခြားပြီး စားရတာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာအထောက်အကူမှ မဖြစ်ဘူး။ ပြီးတော့ အဲ့အကာကြီးမှာ ဘာတွေကပ်နေမလဲ ပိုပြီး စိတ်မသန့်ဘူး။ အဲ့အကာတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ့် သူတွေကရော PPEလို အကာအကွယ်မပါဘဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင် သူတို့အတွက် အန္တရာယ် ပိုရှိနိုင်မလား။
ကိုဗစ်အတွက် ခပ်ခွာခွာ နေဖို့ လိုအပ် တာ နားလည်တယ်။ အဲ့အတွက်ဆိုရင် အလယ်က အကာအရံထက် ဘေးဝိုင်းတွေနဲ့ အကာအရံ လုပ်ထားတာက ပိုသင့်တော်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ခုံတွေကို နေရာချဲမယ်။ တစ်ခုံနဲ့ တစ်ခုံကြား အကာအရံ တွေ ကာမယ်။ အဲ့လိုက ပိုကာကွယ်ရာ ကျမယ် ထင်တယ်။ တစ်အိမ် တည်းနေ၊ တစ်ကားတည်း စီးလာတဲ့လူကြား ကာတာထက် ဘေးဝိုင်းက ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့ လူတွေနဲ့ ကာရံထားတာက ရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ ပိုလက်တွေ့ ကျတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကြီးက ကာကွယ် ဆေးလည်း ခုထိ မသေချာဘူး။ ကာလကြီးက ကြာရှည်ဦးမယ်သဘော။ တစ်သက်လုံး အမြဲတမ်း ဒင်းနဲ့ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရတာမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲ့တော့ ပုံစံအသစ်နဲ့ အသားတကျ New Normal အနေအထားနဲ့ အသက်ရှင် ရပ်တည်သွားဖို့ စီမံတဲ့ အစီအစဉ်တွေဟာ ခေတ္တခဏအတွက် အပြမဟုတ်ဘဲ တကယ် ထိရောက်ပြီး တကယ်အဆင်ပြေတဲ့ နည်းမျိုးတွေ ကို စဉ်းစားကြစေချင်တယ်။
တစ်အိမ်တည်းနေ၊ တစ်ကားတည်းစီး၊ ကူးမယ်ဆို အဲ့မှာတည်းက ကူးနေပြီ။ စားသောက်ဆိုင် ရောက်မှ အကာကြီးခြား စားလိုက်တာ နဲ့ မကူးစရာမရှိပါဘူး။
အိမျက မထှကျခငျ မှာ အမဟော မှာ တမျးခွှတေယျ…(ဖတျနရေငျး ကို မကျြရညျ မထိနျး နိုငျဘူး…)
ဒီရိုငျဒါ နဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ လုပှဲ ထိုးသတျမယျ့ ရကျအား အောငျလအနျဆနျ လကျမှတျ ထိုးပွီ